Akkaataa salaataa | حب الإسلام
: غزالي طه
Gara qiblaa (ka'abaa) garagalanii dhaabatuu namni dandayu.
Salata kana salaataa qalbitti yaaduu ( niyyatuu)
Harka lamaan ol fuudhuu( ceekutti takkaa gurratti qixxeessanii)
Allaahu akbar (الله أكبر) jedhanii hidhatuu.
Harka mirgaa bitarra kaayanii qomarra kaayatuu.
Ijaan bakka sujuudaa laaluu.
Du'aaii salaataan banan qarauu, isiinis ( allaahumma baaid beynii wabeyna kaxaayaaya kamaa baa'adta beynalmshriqi walmagribi, allaahummaa naqqinii min kaxaayaaya kamaa yunaqqassoowbul'abyadu minaddanas, allaahumma gsilnii min kaxaayaaya bilmaa'I wassalji walbarad) ( اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ )
takkaa ( subhaanaka allaahumma wabihamdika, wa tabaaraka ismuka, wata'aalaa jadduka,walaa ilaaha geyruka) (سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، وَتَبَارَكَ اسْمُك ، وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إلَهَ غَيْرُك ) duaaii tana lamaan keessaa tama taate qara'an.
A'uuzu billaahi minassheyxaani rrajiim. ( gadi qabatanii)
Bismillaahi rrahmaani rrahiim. ( gadi qabatanii )
Alhamdu lillaahi Rabbil'aalamiin * arrahmaani rrahiim * maaliki yawmiddiin * iyyaaka na'abudu waiyyaaka nastaiin * ihdinassiraaxalmustaqiim * siraaxallaziina an'amta aleyhim , geyrilmagduubi aleyhim waladdaalliin* aamiin*
بِسْــــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم(1)ِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ(7 ) آمين
kanatti aansanii homa namaa laafe itti qara'an qur'aana rraa , raka'ata lamaan duraa keessatti.
Qaraatii qur'aanaa ol fuudhan,yoo salaata, magribaa, ishaaii fii subii tahe. Yoo zuhrii fii asraa tahe gadi qabatan
Akkuma wayta duraa sanitti harka lamaan ol fuudhanii – allaahu akbar الله أكبر – jedhanii jiba qabatan.
Wayta jilba qabatan mataa ufii ol hin dhaabanii marallee gadi hin buusanii duydaa fii mataa walqixxeessanii qubbiin harkaa adda babaasanii jilba qabatan .
(Subhaana Rabiyalaziimسبحان ربي العظيم ) jedhan wayta 3—5…
Acchi keessatti niragga'an takkaa ni ititan , jarjaraan irraa ol hin deebianii.
(Samiallaahu liman hamidahuu Rabbanaa walakalhamdu ,سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) jedhaa jilbarraa ol deebi'an , yoo namaan salaatanii fii kopaa ufii yoo salaatan, yoo nama duubaan salaatan ammoo (Rabbanaa walakalhamu- ربنا ولك الحمد) ma qofa jedhan.
Asittillee harka ol fuudhan akkuma duraa sanitti.
Asittis sirriitti ol qajeelanii dhaabatan, haga lafeen hundi bakka ufiitti deebitutti.
Itti aansanii sujuudaaf buan, jilba lamaaniin, eegasii harka lamaaniin , eegasii addaa fii funnyaaniin.
Humna torbarratti sujuuda godhan,isaanis , addaa fii funnyaan, harka lamaan , jilba lamaan , qacceelee miila lamaanii.
Sujuuda keessatti yoo ka nama hin rakkifne tahe, Irree lamaan cinaaccharraa acchi buqqisan ,garaallee gudeeda lamaanirraa ol fuudhan, gudeeda lamaanillee mogolee lamaanirraa ol fuudhan.- dhundhummee lamaanillee lafarraa ol kaasanii akkanatti sujuudan.
(Subhaana Rabbiyal'a'alaa- سبحان ربي الأعلى ) jedhuu yaroo 3—5…
Isa keessattillee itituu ,jarjarsuu dhabanii.
Allaahu akbar- jedhanii irraa ol jedhuu,
Jidduu sujuuda lamaanii taauu , miila bitaa afatanii ka mirgaa dhaa banii ,harka lamaan diriirsanii gudeedarra kaayatanii.
(Allaahummagfirlii, warhamnii, wahdinii, wa'aafinii, warzuqnii. اللهم اغفر لي ، ورحمني ، واهدني ، وعافني ، ورزقني ) Jedhuu.
Asittillee ni ititan ( xuma'aniinaa ) godhan.
Allaahu akbar - jedhanii sujuuda lammataa godhuu, isa kanas akkuma ka duraa sanitti dalagan waa hunda keessattuu.
Allaahu akbar – jedhanii raka'ata lammataatiif ol kauu,() waahunda keessattuu akkuma raka'ata duraa sanitti dalagan waalama malee ( Allaahu akbarii hidhannaatii fii duaaii salataan banan. jara lamaan itti hin deebian)
Yoo raka'ata lammataa guuttatan tasha hudaaf taauu, miila bitaa irra taa'anii ka mirgaa dhaabuu,harka lamaan gudeedarra takkaa jilbarra kaayatuu, harka bitaa diriirsanii ka mirgaa cabsatanii quba arrabsituutiin tokkocchummaa Rabbi akeekuu .
Attahiyyaata akkana jedhanii qarauu ( Attahiyyaatu lillaahi , wassalawaatu, waxxayyibaatu, assalaamu aleyka ayyuhannabiyyu warahmatullaahi , wabarakaatuhuu, assalaamu aleynaa wa'alaa ibaadillaahi ssaalihiina , ash hadu an laailaaha illallaahu,wa'ash hadu anna muhammadan abduhuu warasuuluhuu. ) ( Allaahumma salli alaa muhammadin wa'alaa aali muhammadin kamaa salleeyta alaa Ibraahiima , wa'alaa aali Ibraahiima, innaka hamiidun majiid, wabaarik alaa muhammadin wa'alaa aali muhammadin kamaa baarakta alaa Ibraahiima wa'alaa aali Ibraahiima , innaka hamiidun majiid.
( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وعلى آل إبراهيم إنَّك حَمِيدٌ مَجِيد، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . )
Yoo salaanni ta raka'ata lama lamaa taate akka salaata subii takkaa salaata sunnaa waan hafe itti guutanii asumatti salaammatan.(wanni hafe,waa afurirraa maganfatuu fii duaaii kadhatuu,san booda salaammatuu)
Yoo salaanni ta raka'ata sadihii takkaa ta raka'ata afurii taate,- Allaahu akbar – jedhee ol ka'a, harkallee ol fuudha.
Waan hafe kana akkuma ta duraa salaate sanitti salaata, sagalee ol hin fuudhu malee , suuraa biraallee itti hin qara'u malee.
Waan hafe yoo guuttate tashahuda boodaatiif taa'a,miila bitaa miila mirgaa jalaan baasee, taa'aa isaa tiin lafa gayee, takkaa tafa isaa tiin lafa gayee taa'a, miila mirgaa ni dhaaba , attahiyyaataa fii ergamaa Rabii irratti nagaya buusuullee, akkuma duraa sanitti qara'a, haatayuu nagaya buusuun tashahuda boodaa kana keessaatti dirqama , ka duraa keessatti sunnaa.
Ergamaa Rabbii irratti nagaya buusutti aansanii , waa afurirraa maganfatan , akkana jedhanii ( Allaahumma innii auuzu bika min azaabi jahannama, wa min azaabilqabri, wa min fitnatilmahyaa walmamaati, wa min fitnatil masiihiddajjaali , اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ )
Kanatti aansanii duaaii irraa homa fedhan kadhtan . yoo tana kadhatanillee filatamaadha,( Rabbanaa aatinaa fidduniyaa hasanatan,wafil'aakirati hasanatan wa qinaa azaabannaari ) akkasuma ( Allaahumma innii zalamtu nafsii zulman kasiiran walaa yagfiruzzunuuba illaa anta ,fagfirlii magfiratan min indika warhamnii innaka antalgafuururrahiim )
أو( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْت نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي)
مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي ، إنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )
Akkaataa dalagaan tun walitti aantee itti dalgamte kana eeggatuu , akka wal jala hin dabarsine.
Kana booda ni salaammata dura gara mirgaa titti ( Assalaamu aleykum warahmatullaah,السلام عليكم ورحمة الله ) jedhee , akkasuma gara bitaatittillee.
Namni akkanatti salaate hundeelee salaataatii fii dirqamoota isii akkasuma sunnaalee isiillee maraa walitti qabe..
Wanni irraa dhiqatuun barbaacchisu waa jaha
1- Jaarsaa fii jaartiin waliin rafuu.
2- Bishaan ilmi namaa irraa argamu, ka maniyyii() jedhamu namarraa bayuu.
3- Dubartii takka wannii duydaa( heydiin) itti dhufuu.
4- Dubartii takka dayuu.
5- Namani tokko Du'uu ( ka lola keessatti du'e malee )
6- Namni kiristaanaa tokko amanuu.
شروط الوضوء عشرة
Ulaagaaleen wuduuaa kudhan
Mataan fayyaa qabaatuu.
Ufbeekuu (waa addaan baafatuu).
Wuduua goddhaa yaaduu( niyyatuu)
Niyyaa kutuu dhabuu haga geessutti.()
Wanti wuduua dirqama godhaa namarraa cituu.
Wuduua duratti nafa saalaa lamaan bishaniin dhiquu,takkaa dhagaan qulqulleessuu.
Bishaan ququlluu tahuu,ka itti dalagatuun hayyamamus tahuu.
Waan bishaan qaama wuduuaatti gahuu dhooggu ufirraa deemsisuu.
Nama ammaa amma wanti wuduua diigu isatti dhufu yoo tahe wuduua godhatuuf yaroon salaataa seenuu qaba.
فروض الوضوء ستة
Dirqammootiin wuduuaa jaha
1- Fuuala dhiqacchuu, Lulluuqacchhuu fii bishaan funnyaanitti ol fuudhanii gadi deebisuu waliin.
2- Harka lamaan ciqilee lamaan waliin dhiquu.
3- Mataa maraa quyyisuu, acchumaan gurra lamaanillee.
4- Miila lamaan kiyyoo lamaan waliin dhiquu.
5- Akka itti walitti aanu kana eeguu.
6- Walhordofsiisuu( walfaana oofuu)
نواقض الوضوء خمسة
Wanni wuduua balleessan waa shan
1- Waan karaa lamaaniin namarraa bahe.fincaan tahinaa, gadi teessuma tahinaa, maniyyii tahinaa,mazyii() tahinaa,hafuura tayinaa,dhiiga tayinaa,wanti karaa lamaaniin bahe martinuu wuduua ni balleessiti.
2- Sammuun (Aqliin) namarraa deemuu, hirribaan,takkaa maraatuun,takkaa gaggabaan,takkaa macchiin.
3- Nafa saalaa harkaan qabatuu,ka huccuun jidduu hin jirre.
4- Foon gaalaa nyaatuu.
5- Islaamummaa irraa garagaluu.( Rabbiin irraa nu haa eeguu) ()
Ulaagaaleen salaataa sagal
1- Islaama tahuu.
2- Mataan fayyaa qabaatuu
3- Waa addaan baafatuu ( daaima tahuu dhabuu)
4- ( Hadasa) ufirraa fuudhuu.( aakkana jecchuun:wan irraa dhiqatanirraa dhiqatuu fii waan wuduua iraa godhatan irraa wuduua godhatuu jecchuudha).
5- Najisa ufirraa deemsisuu.( Nafaa, hucchuu fii bakka itti salaatanirraallee ).
6- Nafa saalaa ( owraa) dhoysuu.
7- Yaroon salaataa gahuu.
8- Fuula gara qiblaa( ka'abaa) garagalchuu.
9- Salaata kana salaataa yaaduu( niyyatuu)
أركان الصلاة أربعة عشر
Hundeeleen salaataa kudha afur
1- Dhaabatuu namni dandayu.
2- Allaahu akbar – jedhee hidhatuu.
3- Faatihaa qarauu.
4- Jilba qabatuu(Rukuua godhuu).
5- Ol deebiuu , Jilba qabatuu sanirraa .
6- Humna torabarratti Adda lafaan tuquu (sujuuda godhuu)
7- Sujuudarraa ol jedhuu.
8- Jidduu sujuuda lamaanii taauu.
9- Hunduma dalagaalee salaataa keessatti itituu ( xuma'aniinaa godhuu)
10- Akka hundeeleen tun walitti aantuun kana eeguu(tartiiba isii eeguu)
11- Attaahiyyaata dhuma salaataa qarauu.
12- Taauu attahiyyaata dhuma salaataa saniif.
13- Nagaya buusuu Ergamaa Rabbii irratti n.r.i.
14- Salaama lamaan baafatuu.
Dirqamootiin salaataa saddeeti
1- Allaahu akbarii salaata keesssatti jedhn hunda ( Allaahu akbarii hidhannaa malee)
2- Jeccha – samiallaahu liman hamidahuu- jedhu.(nama namaan salaatuu fii ka kopaa salaatuuf )
3- Jeccha – Rabbanaa walakalhamdu- jedhu , hundaafuu.
4- Jeccha – subhaana Rabbiyalaziim – jedhu,rukuua keessatti.
5- Jeccha – subhaana Rabbiyal'a'alaa – jedhu,sujuuda keessatti.
6- Jeccha – Rabbigfirlii…jedhu, jidduu sujuuda lamaanitti.
7- Attahiyyata duraati.
8- Taauu attahiyyaata duraa kanaaf.
Wanni salaata balleessan saddeeti
1- Beekkaan dubbatuu.
5- Huccuun namarraa saaqamtee qaamni silaa dhoyfamuu qabu mul'atuu.
6- Qiblarraa garagaluu.
7- Socchoa hedduu,walitti dhaabataa tahe socchouu.
8- Xahaaraan diigamuu, takkaa baduu.
Wanti asitti dubbatame kun hundinuu waan namani salaatu hundi beekuu qabuu sirritti hubaddhuu beekii itti dalagillee.
Yaa Rabbi dalagaa teenna maraa tasiif taate nuu godhii nurraallee fuudhi.
Nagayaa fii Rahmanni yoo maraa addaan hin cinne ergamaa isaa irratti haajiraatu, warra isaaniitii fii wahellan isaaniillee, warra toltuun isaan hordofeen waliin
Bara 1433 H
Akkaataa itti dhiqatan …………………………………. 2
Akkaataa wuduua itti godhatan ………………………. 3
Akkaataa salaataa ……………………………………….4
Wanni irraa dhiqatuun barbaacchisu waa jaha ………….9
Ulaagaaleen wuduuaa kudhan ………………. 9
Dirqammootiin wuduuaa jaha ……………………….. 10
Wanni wuduua balleessan waa shan ………………… 10
Ulaagaaleen salaataa sagal ………………………….... 11
Hundeeleen salaataa kudha afur……………………………… 11
Dirqamootiin salaataa saddeeti ……………………….………12
Wanni salaata balleessan saddeeti …………………………….12
موقع حب الإســــــــــــــــــــــلام
 - arkaana = takkaahuu hundeelee beekkaan takkaa daguun yoo dhiise salaanni isaa nibaddi. Haga isii fidutti.
Waajibaata = takkaa dirqamootii isii yoo beekkaan dhiise salaanni nibaddi. Yoo irraanfiin dhiise sujuuda daguu lama sujuuda .
 - Sunnaan asii fii wayta raka'ata afraffaa tiif ol ka'an teessuma xocchee haara baafataa, taa'uudha.
 - Tashahudni duraa haga asiitti dirqama, nagaya Rasuularratti buusuun sunnaa.
 - Maniyyiin ; Bishan adii furdaa hafura qabu ka utaalu wayta fedhiin namatti jabaatte ka namarraa bayu.
 - akkana jecchuun ; osomaa wuduu'a godhataa jiru lakkii amma dayfa ufirraa dhiqaa wuduu'a booda godhaa jecchutti niyyaa ufii gara hin galchin jecchuudha.
 - Mazyii jecchuun ; Bishaan adii qal'aa walharkisu ka yoo dubartii waliin tapatan takkaa waan dubartii yaadan namarraa bayu. Inni najisa waan inni tuqe mara dhiquu barbaacchisa.
 - waan kana malee jiru 1 – waan fokkataa najisaa ka qaama namaa iraa bahu karaa lamaaniin malee. 2 – dubartii qabatuu. 3 – nama due dhiquu. 4 – Haqqisuu fii Funuunuu , ulamaa'iin hedduun wuduu'a hin balleessu jedhan .
jecha fooyyessi: Akkaataa salaataa
jecha fooyyessi - Suuraa - waraqaa - Sagalee - Vidiyoo - yaada
العربية English French 中文 Urdu